Sahirana ny toby miahy ireo ankizy marefo | NewsMada
Sahirana ny toby miahy ireo ankizy marefo
Marobe ireo tokantrano marefo ara-pivelomana mahatsiaro ho fadiranovana ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana efa ho telo volana tsy ahitana vahaolana izao. Mamonjy ireny toby miahy ny zaza sy ny ankizy na miahy ara-tsakafo ireny izy ireo mba hahafahany manome sakafo ny zanany tsy ho maty mosary.
Raha ny tatitry ny fandaharanasam-pirenena momba ny sakafo, manodidina ny 122 ireo toby mitaiza zaza sahirana eto Antananarivo sy any Toamasina no mikaikaika fa tena sahirana amin’ny fiahiana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ireny ankizy raisiny ireny.
Mihena ny famatsiana ara-tsakafo voarain’ireny toby ireny ka tsy afa-manoatra izy ireo fa miaina amin’ny zava-misy. Miantraika mivantana amin’ny ankizy marefo toy ny zanaky ny sahirana, kamboty efa miankin-doha amin’ireny toby ireny io tsy fahampiana io.
Manomboka amin’io volana jolay io, nanapa-kevitra ny fandaharanasam-pirenena momba ny sakafo sy ny minisiteran’ny Mponina ary ny SOS Villages d’enfants Madagascar fa hanome fanampiana ara-tsakafo sy fitaovana fiarovana ara-pahasalamana ho an’ireny ankizy eny amin’ny toby misahana ny fiahiana ara-tsakafo ireny.
Efa mifantina ireo toby hanaovana izany asa izany ireo vaomiera misahana izany amin’izao fotoana mba hiantraika mivantana amin’ny ankizy tena marefo ny fiahiana ara-tsakafo omena azy ireo.